Indlela yokuguqula umsebenzisi usebenzisa i-"su" Command
Indlela Yokuba Umsi okanye Naliphi Umnye Umsebenzisi usebenzisa iLinux Command Line
by UGary Newell
Namhlanje kunokwenzeka ukusebenzisa i-Linux ngaphandle kokunxibelelana kakhulu nomgca womyalelo kodwa kukho izihlandlo ezininzi apho ukwenza into usebenzisa umgca womyalelo kulula kakhulu kunokusebenzisa ithuluzi lokubonisa.
Umzekelo womyalelo onokuwusebenzisa rhoqo ukusuka kumgca wolawulo uyifumana ukufumana okukhoyo ukufaka isofthiwe ngaphakathi kwezabelo zeDebian kunye noBuntu.
Ukuze ufake isoftware usebenzisa i-tap-get you need to be a user who has permissions enough to do so.
Enye yezinto zokuqala zokusebenzisa abasebenzisi bee-desktop ezidumile ze-Linux ezifana ne-Ubuntu kunye ne-Mint bafunde ngothando.
Umyalelo wothando uvumela ukuba usebenze nayiphi na umyalelo njengomnye umsebenzisi kwaye uyasetyenziswa ukuphakamisa iimvume ukwenzela ukuba umyalelo uqhutywe njengomlawuli (obizwa ngegama leLuxu owaziwa njengomsebenzisi wezityalo).
Oku kulungile kwaye kulungile kodwa ukuba uya kuqhuba uchungechunge lwemiyalelo okanye kufuneka usebenze njengomnye umsebenzisi kwixesha elide elide ngoko ufunayo umyalelo.
Esi sikhokelo sizokubonisa indlela yokusebenzisa umyalelo kwaye uza kunika ulwazi malunga nokutshintsha okukhoyo.
Shintsha Umsebenzisi Umsuka
Ukuze utshintshele kumsebenzisi wengcambu kufuneka uvule isigxina ngokucindezela i-ALT kunye ne-T ngexesha elinye.
Indlela oyitshintshela ngayo umsebenzisi weengcambu ahluke. Umzekelo kwimida esekelwe kwi-Ubuntu efana neLinux Mint, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu kunye neLubuntu kufuneka uguqule usebenzisa umyalelo wothando njengendlela elandelayo:
Ukuba usebenzisa i-distribution eyakuvumela ukuba usethe iphasiwedi ye-root xa ufaka ukusasazwa ngoko unokusebenzisa nje oku kulandelayo:
Ukuba ugijime umyalelo ngothando, uya kucelwa iphasiwedi ye- sudo kodwa ukuba ugijime umyalelo njengokuba uya kufuneka ukufaka iphasiwedi yengcambu.
Ukuqinisekisa ukuba ngokuqinisekileyo utshintshile kwi-root type yomsebenzisi umyalelo olandelayo:
Umyalelo we-whoami uxelela ukuba yeyiphi umsebenzisi osebenzayo ngoku.
Indlela yokutshintshela omnye umsebenzisi kunye nokujongana nengqongileyo yabo
Umyalelo wokusetyenziswa ungasetyenziselwa ukutshintsha kwenye i-akhawunti yomsebenzisi.
Ngokomzekelo, cinga udale umsebenzisi omtsha obizwa ngokuba ngumncedisi usebenzisa umyalelo we-useradd ngolu hlobo:
sudo useradd -m ted
Oku kuya kudala umsebenzisi obizwa ngokuba yi-ted kwaye uza kudala i-home directory ye-ted ebizwa ngokuba yi-ted.
Uya kufuneka ubeke iphasiwedi ye-akhawunti ye-ted ngaphambi kokuba isetyenziswe usebenzisa umyalelo olandelayo:
Umyalelo ongentla ungakucela ukuba udale uze uqinisekise iphasiwedi ye-akhawunti ye-ted.
Ungatshintshela kwi-akhawunti ye-ted usebenzisa umyalelo olandelayo:
Njengoko umi umyalelo ongentla ungakunena nje nge-ted kodwa awuyi kufakwa kwifolda yekhaya yokuvavanya kwaye nayiphi na isethingi esongeziweyo kwifayili ye .bashrc ayiyi kulayishwa.
Kodwa unganokungena kwi-intanethi kwaye usebenzise imo esebenzisa umyalelo olandelayo:
Ngeli xesha xa ungena ngemvume njenge-ted uza kufakwa kwi-directory yendlu yakho.
Indlela efanelekileyo yokukubona oku kusebenze ngokugcwele yongeza uncedo lwe-screenfetch kwi-akhawunti yomsebenzisi.
Ukufeza Umyalelo Emva kokutshintsha iiAkhawunti zomsebenzisi
Ukuba ufuna ukutshintshela kwenye i-akhawunti yomsebenzisi kodwa unokuqhuba umyalelo ngokukhawuleza xa ushintshela ukusebenzisa -c ukutshintsha ngokulandelayo:
Kulo myalelo ungentla uguqula umsebenzisi, i -ccfetch isebenzisa umthombo wesikrini kwaye ishintshela kwi-akhawunti ye-ted.
Ndibonisile ukuba ungatshintshela njani kwenye i-akhawunti kwaye unika indawo efana nayo usebenzisa i-switch.
Ukugqiba ungasebenzisa oku okulandelayo:
Ungakwazi ukuqhuba igoboloni eyahlukileyo ukusuka kokungagqibekanga xa utshintsha umsebenzisi ngokunikezela--shintsha njengolu hlobo lulandelayo:
su -s -
Ungalondoloza izicwangciso zendawo ngoku ngokusebenzisa oku kutshintshiweyo:
Abasebenzisi abaninzi abasisigxina baya kufumana kunye nomyalelo we-sudo ukuqhuba imiyalelo eneemfanelo eziphakamileyo kodwa ukuba ufuna ukuchitha ixesha elide elingene ngemvume njengomnye umsebenzisi ongawusebenzisa umyalelo.
Kubalulekile ukuba uqaphele nangona oko kuyilungileyo ukuqhuba kuphela njenge-akhawunti kunye neemvume ozifunayo emsebenzini. Ngamanye amagama musa ukuqhuba yonke imiyalelo njengengcambu.
Dos2unix - I-Linux Command - Unix Command
Bunzip2 - I-Linux Command - Unix Command
Umzekelo Ukusetyenziswa kwe-Linux Host Host
Funda nge-Linux Command mtr
Umzekelo Ukusetyenziswa kwegama lomninimzi wokuLawula
Ungayitshintsha njani iWindows kwi Linux
Funda i-Linux Command - swapon
Indlela yokusebenzisa i-Init Command kwi-Linux
I-Best Dash Cams yokuthenga ngo-2018
I-Best Dell Laptops yokuthenga ngo-2018
Indlela yokugcina kwi-Gmail usebenzisa i-One Keystroke
I-GPS Yakho Indawo: Fumana Izingane Zakho Nge GPS
Yenza i-Macro yokuFometha kweTekisi
Ukusebenzisa i-MyYahoo njenge-RSS Reader
Indlela yokwenza i-Impilt Shift Effect kwi-GIMP
Konke Nge-VUDU On-Demand Service Streaming Streaming
Umdlalo weViewmatch Death: NHL 16 kunye neFIFA 16
Yiyiphi i-Heck yikrari yeRCA?
Ukulwa neMidlalo Yesiqhelo - Iingcebiso Zokuphucula Ukulwa Kwakho
I-Essential Windows Keyboard Shortcuts
Indlela yokukhetha yonke imiyalezo kwi-Gmail
Isixhobo soKhusela kwi-Adobe InDesign
Indlela yokulungelelanisa indlela yokuPhatheka kwePhoto kunye ne-GIMP
Ziziphi iingenelo kunye neenzuzo ze-VPN?
Ooh Ya? Indlela yokutshintsha iBettery ye-Ouya Controller
I-Skyrim Hacks, iichibi kunye neikhowudi zokukopela
I-9 Eyona Iipapopi Eziphambili Zeentonga Zokuthenga Ngo-2018
Indlela yokuhambisa iPodcast yakho okanye i-Intanethi ye-Intanethi kwi-AM, i-FM, okanye kwiRatellite Radio
I-Epson's Perfection V39 Color Scanner